Uru Ọgụgụ akwụkwọ na-enye ụmụaka na ndị okenye | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Lee otu nwata na agu akwukwo taa dị anyị ka onyogho kwesiri itinye foto. Ma ọ bụ na, ọtụtụ na ndị ọzọ bụ ndị jụrụ akwụkwọ, ma ọ bụ ndị na-agụ naanị ndị a manyere n'ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ (yana ọbụlagodi n'oge ndị ahụ ha na-anwa ịhọrọ nke kacha mma). Na-akwalite ọgụgụ nke ụmụaka abụghị naanị ịmanye ha ka ha gụọ, kama ọ bụ inweta ikike dị ukwuu nke naanị ndị na-agụ ya maara.
Oge ụfọdụ, a na-ahụkarị akwụkwọ dịka peeji nke na-akọ akụkọ, ma ọ bụ na-abaghị uru, mana obere ihe ọzọ. Ma eziokwu bụ na readinggụ akwụkwọ na-eweta ọtụtụ uru Ihe ekwesiri imata ka ighota ihe mere oji di nkpa igba umuaka ume.
1 Nnukwu uru dị n'ịgụ akwụkwọ
1.1 Inyekwu okwu
1.2 Mee ka ịta ahụhụ dịkwuo mma
1.3 Jiri akwukwo na-eme ihe ncheta
1.4 Mụta ide ihe
Nnukwu uru dị n'ịgụ akwụkwọ
La na-agu akwukwo ọbụghị naanị na ọ na - eme ka ị mata akụkọ dị ịtụnanya nke onye ọzọ kere n’enweghị ihe ọ bụla. N'ezie, akwụkwọ na-akụzi ọtụtụ ihe. Ihe akaebe bụ na ị nwere ike irite ụfọdụ uru n'ịgụ ihe, dị ka ndị a:
Spanish nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100.000 okwu, ma ọ dịghị onye maara ha niile. Otú ọ dị, Na-eto eto ha na-eji naanị 25% nke okwu ndị ahụ, ebe onye nọ n'ọkwa dị larịị nwere ike ịma n'etiti 500 na 1000. Otu onye ode akwụkwọ, nwere ike iru 3000. Mana, kedu maka ndị ọzọ?
Ọ bụ eziokwu na akwụkwọ agaghị enwe mkpụrụ okwu 100.000, mana ha ga - enyere aka ịgbasawanye okwu site na nwata, nke a ga - emekwa ka ha mata etu esi ekwupụta onwe ha nke ọma na ọnọdụ dị iche iche.
Mee ka ịta ahụhụ dịkwuo mma
Mgbe ị na-agụ ihe, a ghaghị ịdabere na akwụkwọ ahụ na leta na okwu ndị ị na-agafe. Site na ị payinga ntị na itinye uche mgbe ị na-agụ ihe, ị na-enyere uche gị aka ịmata lekwasị anya ma payaa ntị ka ihe i ji n'aka.
Y na-ahụta nghọta.
Mgbe nwatakịrị lekwasịrị anya n'ihe ọ na-agụ, a na-eche na, ọ bụrụ na ị jụọ ya ihe ọ gụrụ, ọ ga-ama otu esi aza gị n'ụzọ dabara adaba. Ederede ederede, ndị nke ị ga-eme mgbe ị dị obere mgbe ị na-agụ akwụkwọ, echefuola ugbu a.
Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ha bara uru n'ihi na ha mere ka ị toaa ntị na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ị na-agụ ma tinye ya n'uche gị ka ị nwee ike mee nchịkọta nke ọgụgụ ahụ.
Jiri akwukwo na-eme ihe ncheta
Enwere ihe omumu nke kwadoro na, oburu na ejighi nchekwa mee ihe, o furu efu. N’oge ugbu a, icheta ihe dị mfe dịka nọmba ekwentị nke ndị enyi gị, ma ọ bụ adreesị ụlọ nke ndị ikwu gị mgbe ụfọdụ na-aghọ ihe a na-apụghị ichetụ n’echiche, karịsịa ịnwe ekwentị mkpanaaka n’aka ebe ihe niile na-echekwa ma ọ dịghị mkpa iburu ihe n’isi.
N’aka nke ọzọ, mgbe ị gụchara otu akwụkwọ, ihe nkịtị bụ na ị chetara akụkọ ahụ, ikekwe ọ bụghị ya niile, kama ọtụtụ ihe. Na na, n'ikpeazụ, na-enyere ndị akwara na akwara ozi ghara ịla n'iyi.
Mụta ide ihe
Ọ nwere ike ịdị ka nzuzu, mana ọ bụghị n’ezie. Ọgụgụ na-enyere aka ịbawanye okwu, kamakwa nke ahụ, n'oge edere, ị na-enye misspell agụ nke a na-eme, n'ihi na ọ dịka a ga-asị na mkpu dara n'isi ya gwa anyị na enwere okwu na okwu adịghị mma.
Na mbu nke ahụ nwere ike ọ gaghị eme, mana ka oge na-aga (na ọgụgụ nke akwụkwọ ndị ọzọ), ọ bụrụhaala na enwere ịta ahụhụ mgbe ị na-agụ ihe, ọ ga-ekwe omume ide n'enweghị njehie, ihe a maara taa na ụmụaka dịkarịsịrị ike na-eme ha.
Gụ akwụkwọ nwere ike ịdị na-agwụ ike mgbe akụkọ na-adịghị amasị gị, akwụkwọ edemede, ma ọ bụ onye edemede. Ma onye ọ bụla nwere nke pụrụ iche, nke ahụ bụ onye na-enwe mmasị ịgụ ihe. Site na nwata ị ga-anwa ịchọta akwụkwọ ahụ dị mma iji nweta elele niile nke ihe dị mfe dịka ọgụgụ nwere ike iweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Kedụ uru dị n'ịgụ akwụkwọ maka ụmụaka na okenye